ब्राजिलमा क्रिसमसको परम्परा | Absolut यात्रा
लुइस मार्टिनो | | ब्राजिल
क्रिसमस जन्म दृश्य
क्रिसमस परम्पराहरु मा ब्राजिल तिनीहरू परिणाम हुन् संस्कृतिहरूको संयोजन त्यो अमेरिकी देश बनाउँछ। एकातिर, त्यहाँ धेरै देशी जातीय समूहहरू छन् र अर्कोतर्फ, यो जनसंख्या बिभिन्न राष्ट्रहरू, विशेष गरी पुर्तगालीका प्रवासीहरूको वंशबाट बनेको छ। यो तार्किक छ किनकि शताब्दियौंदेखि रियो दि जेनेरियो क्षेत्र उसको उपनिवेश थियो। यद्यपि स्पेनिश, इटालियन र जर्मन मूलका नागरिकहरू पनि प्रशस्त छन्।
फलस्वरूप, हामी भन्न सक्छौं कि ब्राजिलमा क्रिसमसको परम्पराले प्रभावलाई समाहित गर्दछ ल्याटिन र ईसाई संस्कृति तीसँगै मध्य यूरोपीय र प्रोटेस्टेन्ट देशहरू। यदि तपाईं यी चलनहरूको बारेमा अधिक जान्न चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई पढन जारी राख्नको लागि हौसला दिन्छौं।
1 क्रिसमस वरिपरि ब्राजिल परम्पराहरु
1.1 रूख र जन्म दृश्य
1.2 क्रिसमस हव्वाको खाना
1.3 क्रिसमस क्यारोलहरू र नौगट
1.4 सान्टा क्लाउज
2 बर्षको अन्त्य वरिपरि परम्पराहरु
2.1 सैन सिल्वेस्ट्रे दौड
2.3 ब्राजीलमा क्रिसमसको परम्पराको बीचको रीतिथिति
3 ब्राजिलमा अन्य क्रिसमस परम्पराहरू
क्रिसमस वरिपरि ब्राजिल परम्पराहरु
हामीले तपाईंलाई सम्झाउनुपर्ने पहिलो चीज भनेको ब्राजिलमा क्रिसमस लाग्छ गर्मी। देश दक्षिणी गोलार्धमा छ, डिसेम्बर त्यो मौसम को एक हिस्सा हो र यसले परम्परालाई प्रभावित गर्दछ। तिनीहरू मध्येका केहि वरिपरि हेरौं क्रिसमसको दिन.
रूख र जन्म दृश्य
ब्राजिलियाहरूले पनि तिनीहरूको घर र सडकहरूमा क्रिसमस रूख स्थापना गरे। र तिनीहरू यसलाई परम्परागत वस्तुहरूसँग सजिन्छन् जुन हामी यहाँ प्रयोग गर्दछौं, तर पनि फूलहरू यसको बगैंचाको। उदाहरणका लागि, रियो दि जेनेरियोमा यो पहिले नै परम्पराको रूपमा छ एरभोर नताल दा लगोआ, जुन रोड्रिगो डे फ्रेटास लगुनको बीचमा स्थापित छ।
जन्म दृश्य को रूप मा, ब्राजिल मा यो भनिन्छ prespian, जुन ल्याटिन शब्दबाट आएको हो presepium, जसको अर्थ "गोठालो" हो। यो ती देशहरूमा सत्रौं शताब्दीमा ग्यासपार डे सान्तो अगोस्तिन्हो नाम गरेका फ्रान्सिस्कन भिक्षुद्वारा परिचित भएको थियो। को शहर ओलिंडा यसमा ब्राजिलमा स्थापना भएको पहिलो जन्मको दृश्य होस्ट गर्ने योग्यता छ तर अहिले यो देशभरि नै परम्पराको रूपमा छ, विशेष गरी यसको उत्तरपश्चिमी भागमा, बहा, पाराबा, पेर्नम्बुको वा रियो ग्रान्डे डो नोर्टे जस्ता शहरहरूमा।
क्रिसमस हव्वाको खाना
ब्राजीलियनहरु संग क्रिसमस पूर्वसन्ध संग मनाउँछन् बेलुकाको खाना। वास्तवमा स्पेनमा जस्तै उनीहरू पनि प्रशस्त थिए। एउटा सामान्य खानामा उदाहरणका लागि टर्की, रंगीन चामल, हेम, ताजा तरकारीहरू र फलहरू समावेश हुन्छन्।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, मेनू उत्तर अमेरिकीसँग युरोपियन भन्दा बढी मिल्दोजुल्दो छ। अर्कोतर्फ, ब्राजिलियनहरू पनि यसमा भाग लिन्छन् मध्यरात्र मास, जुन डिसेम्बर २ on मा बिहान समाप्त हुन्छ। त्यो दिन, उनीहरू फेरि भेट्न मनाउँछन् नेटालबाट सिआ वा क्रिसमस डिनर।
क्रिसमस क्यारोलहरू र नौगट
ब्राजिलमा क्रिसमसका परम्पराहरूमा पनि यी दुई तत्वहरू समावेश छन्। क्रिस्मस क्यारोलहरूको बारेमा, तिनीहरूलाई बाँकी विश्वमा जस्तै गाइन्छ, विशेष गरी प्रख्यात 'साइलेन्ट नाइट', जसलाई चिनिन्छ 'शुभ Noite'। यद्यपि त्यहाँ ब्राजिलवासीहरू पनि छन्, उदाहरणका लागि स्नातकहरू 'ए बोर्बोलेटा' y 'सपतिन्हो जनेला' ('विन्डोमा जुत्ता')।
नौगटको रूपमा, तिनीहरू पनि ब्राजिलको धेरै भागहरूमा युरोपेली प्रभावका कारण खाइन्छन्, साथै प्यानेटोन इटालियन र चोरी भयो जर्मन तर अधिक विशिष्ट छन् स्लाइसहरू, हाम्रो फ्रान्सेली टोस्ट जस्तै धेरै। दक्षिण अमेरिकी देशको क्षेत्र मा निर्भर गर्दै, तिनीहरू चिनी र दालचिनी, पोर्ट वाइन वा मह सिरप संग तयार छन्।
तीन राजाको परम्परा ब्राजिलमा अवस्थित छैन, तर त्यो सान्टा क्लाउज। त्यहाँ उनी पापाइ नोएल भनेर चिनिन्छन् र विश्वको अन्य भागहरुमा उनी बच्चाहरुलाई उपहार दिन्छन् र ग्रीनल्याण्डबाट आएका छन्। यद्यपि तिनीहरूको लुगाहरू फरक छन्, यो तार्किक केहि हो यदि हामीले ध्यान दियौं भने दक्षिण अमेरिकामा यो गर्मी हो। विशेष रूपमा, परम्पराले आज्ञा गर्दछ कि ऊ एकमा लगाईन्छ राम्रो रेशम सूट, न्यानो जाडो को कपडा संग छैन।
बर्षको अन्त्य वरिपरि परम्पराहरु
ब्राजिलमा नयाँ वर्षको उत्सवमा सबै सामग्रीहरू छन् जुन अरू ठाउँमा पाइन्छन्। यद्यपि यसले केहि भिन्न भिन्न तत्वहरू पनि प्रदान गर्दछ र केही एकदम उत्सुक।
सैन सिल्वेस्ट्रे दौड
विश्वका सबै देशहरूका लागि नयाँ वर्षको स्वागतलाई सामान्य छ। र ब्राजिल यसको अपवाद छैन। देशका सबै शहरहरु संगठित आफ्नो सान सिल्वेस्ट्रे। यो प्रथा १ 1925 २। मा स्थापित भएको थियो र त्यसदेखि यो उत्सव मनाउन रोकिएको छैन।
Cariocas पनि मध्यरातमा chimes सुन्न बाहिर आयो। यो सत्य हो कि त्यहाँ त्यहाँ अpes्गुरहरू छैनन् र त्यो वर्गहरूको सट्टा तिनीहरू सामान्यतया त्यहाँ जान्छन् समुद्र तट। यो तिनीहरू भन्छन् रिभिलन पार्टी र यसको उत्तेजनाको मुख्य स्रोतहरू संगीत र आतिशबाजी हुन्, जुन पछि केहि क्षेत्रहरूमा वास्तवमै प्रभावशाली छ, जहाँ उनीहरूले केही मिनेटको लागि आकाशलाई प्रज्ज्वलित गर्छन्।
साउ पाउलोको सेन्ट सिल्भेस्टर
ब्राजीलमा क्रिसमसको परम्पराको बीचको रीतिथिति
विश्वका प्रायः सबै भागहरूमा, वर्षको सुरूवातमा केही विधिहरू र रीतिथितिहरू समावेश छन्, तर दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा तिनीहरू विशेष गरी असंख्य छन्। यसैले ब्राजिलियाली प्राय: सेतो लगाउनु न्यू इयर इभमा। त्यस्तै गरी, समुद्र तटमा नयाँ वर्षको आगमन मनाउनेहरू समुद्रमा जान्छन् र सात छालहरू उफ्रिन्छन्। स्पष्ट रूपमा यो ल्याइएको संस्कार हो अफ्रिका पहिलो दासहरु को लागी जो क्षेत्र मा आए।
यी अनुष्ठानहरूको साथसाथ, यसलाई दिनको लागि क्यारियोकास बीच पनि चलन छ हातमा शैम्पेनको गिलासको साथ तीन उफ्रिन्छ रातको बाह्र बजे; फिंजाउनु पहेंलो फूल घर कोठा को माध्यम बाट र सधैं सही कपडा राख्नुहोस्। अन्तमा, पौराणिक कथा भन्छन कि, यदि जनवरी १ मा पहिलो भेट एक व्यक्ति द्वारा गरिएको छ भने, यो नयाँ वर्षको लागि समृद्धि को संकेत हो। यद्यपि यो मिथक तपाईलाई अलि माचो देखिनेछ, जस्तो कि यसले हामीलाई गर्दछ।
ब्राजिलमा अन्य क्रिसमस परम्पराहरू
क्रिसमसको मौसममा ब्राजिलियनहरू प्राय: खेल्छन् गोप्य साथी। तपाईंलाई थाहा छ, यसमा व्यक्तिहरूको समूह समावेश हुन्छ एक अर्कालाई उपहार दिने व्यक्तिले उनीहरूलाई दिनु भएको व्यक्तिको नाम थाहा बिना उपहार दिन्छ। क्रिसमसको दिनमा ती सबै व्यक्तिहरू भेट्न उपहारहरू लिन आउँदछन् र उनीहरूको गोप्य साथी को हो भनेर पत्ता लगाउँदछन्।
अन्तमा, ब्राजिलमा क्रिसमसको परम्परा युरोप र बाँकी अमेरिकी देशहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ। यद्यपि यसमा केहि पनि छ जिज्ञासु तत्वहरु त्यो, संसारको यस भाग मा, हाम्रो ध्यान आकर्षित। यसको एक राम्रो उदाहरण नयाँ सालको विधिहरू हुन्। के तपाई उनीहरूलाई खास अनौठो भेट्नुहुन्न?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » ब्राजिलमा क्रिसमसको परम्परा
एन्जिल फल्सको बारेमा जिज्ञासा, विश्वको सब भन्दा माथि झरना
यस प्रकार कोलम्बियाको स्वतन्त्रता जाली थियो